Tetikasa vaovao PMI Measure Malaria: hamafisina ny fahazoana antontan-kevitra momba ny fahasalamana | NewsMada
Tetikasa vaovao PMI Measure Malaria: hamafisina ny fahazoana antontan-kevitra momba ny fahasalamana
Nampahafantarina, omaly, tamin’ny alalan’ny fivoriana ampitain-davitra ny tetikasa vaovao PMI Measure Malaria (PMM) ho fanamafisana ny antontan-kevitra momba ny fahasalamana manerana ny Nosy, indrindra ny ady hamongorana ny aretina tazo eto amintsika.
Fanohizanan ny tetikasa “Measure evaluation”, izay ho tapitra amin’ity taona ity ny PMM. Efa tafapetraka niaraka amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana avy amin’ny fikirakirana ny “Measure evaluation” ny fototra ilaina hanamafisana ny antontan-kevitra momba ny fahasalamana ka tafiditra ao ny fanaraha-maso ny fivoaran’ny aretina tazo. Nofanina ny tompon’andraikitry 200 teny anivon’ny distrika hifehy ny fitaovana fanangonana sy fizarana antontam-baovao tao anatin’izany.
Haharitra dimy taona ny fanatanterahana ny PMM ka anisan’ny firenena iray amin’ny 10 aty Afrika hisitraka azy i Madagasikara. Hanokana vola 1 480 000 dolara ampiasaina ho an’ny taona voalohany 2020-202 ny USAID mpanohana ara-bola ny tetikasa. Tanjon’ny tetikasa ny hanome vaovao maro-pototra sy azo ampiasaina rehefa misy fanapahan-kevitra mila raisina ho an’ny fahasalamam-bahoaka eto an-toerana sy any ivelany. Ampiasaina ny teknolojia vaovao hanangonana sy hitaterana izany manomboka eny ifotony, indrindra ho an’ny fanaraha-maso ny fivoaran’ny aretina tazo. Hamolavolana paikady hamongorana ity aretina ity ny antontam-baovao rehetra voangona, hoy ny fanazavan’ny tompon’andrakitra. Hiara-kiasa amin’ny sampandraharahan’ny minisiteran’ny Fahasalamana maromaro voakasika toy ny fahanaraha-maso ny valanaretina, ny ady amin’ny tazo ary ny fahasalaman’ny ankohonana… Ny tetikasa hanamora ny fanatanterahana.
Aretina mbola olana ho an’ny fahasalamam-bahoaka ny tazo eto amintsika ary niakatra ny isan’ny marary ho an’ny enim-bolana voalohany raha oharina tmin’ny taon-dasa, araka ny tatitry ny tompon’andraikitra.